MPANAO GAZETY NOVONOIN’NY DAHALO
Tia voninahitra loatra ny filoha mpisolo toerana Rivo Rakotovao. Na efa anio aza ny famindram-pahefana eo aminy sy ny filoha vaovao no hatao,
Efa hita tokoa fa bolokim-bazaha ny filoha vaovao Andry Rajoelina na dia niezaka ny nanafina izany aza tamin'ny filazana fa tsy hiankina ara-bola amin'ny
Mpianatra Malagasy monina any frantsa antsoina hoe Andotiana Randriamampianina, 23 taona, mirefy 1m58 no tsy hita popoka nanomboka ny 9 janoary teo. Mitaintaina fatratra mikasika ny momba azy ankehitriny ny raiamandreniny sy ny fianakaviany ary manao antsoavo amin’izay mahafantatra azy rehetra manerana izao tontolo izao mba hampandre rehefa misy vaovao.
Fidèle Jules, mpanao gazety iray eo anivon’ny Radio Mampita (FM 94 ao Fianarantsoa) no maty novonoin’ny dahalo.
Notafihan’ny olona tao an-tokantranony izy ny alin’ny talata teo ary notifirin’ny jiolahy tsy nananany antra, tao Ambatovory-Fianarantsoa. Sady mpanao gazety izy no mpanentana ary koa misahana manokana ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin’ny asany. Nampihetsi-po ny maro ity fahafatesana ity, indrindra manoloana ny tsy fandriampahalemana.
MPITAINGINA MOTO MATY INDRAY
Nisy mpitaingina moto maty indray. Nohitsahin’ny kamiao ny tovolahy iray teny amin’ny RN7 izay mifanandrify an’i Behenjy. Nisongona tao anatin’ny fiolanana ilay kodiaran-droa no nifanehatra tampoka tamin’ilay fiarabe. Maty tsy tra-drano ilay tovolahy raha naratra mafy kosa ny olona izay niaraka taminy nitaingina ilay moto. Nosokirina tao ambanin’ilay fiarabe izay vao afaka ilay razana, nitsangam-bolo izay nahita.
FANDROBANA TANY TOAMASINA
Nisandoka ho mpiasan’ny Jirama dia nandroba. Izany indray no nitranga tao Toamasina, tao amin’ny fokontany Beryl-Rose, Tanambao V. Manana taratasy famantarana ary koa taratasin’ny orinasa izay manamarina ny hataony ireo olon-dratsy. Mazava hoazy fa sandoka avokoa izany. Vao tafiditra tao an-trano dia nodarohana ny ramatoa izay tao ary norahonana tamin’ny fitaovam-piadiana mba hamoaka ny vola. Lasa ny 16 tapitrisa ariary izay notehirizina tao an-trano.
ZANDARY MATY AM-PERINASA
Nampiakarina ny mariboninahitr’i Jeannot, ilay zandary maty am-perinasa ary nosokajiana ho maherifo. Nahazo ny galona zandary faharoa izy ary natao ny lanonana fohy talohan’ny fanitrihana azy tao am-pasan-drazany. Raha hiverenana dia maty tao Emamba, manodidina an’i Betroka, raha nifandona tamin’ny dahalo io zandary io. Mandeha kosa ny savahao izay nahavanon-doza ary nampiana an’isa ny mpanao fanadihadiana.
Afrikanina roa sy vehivavy Malagasy iray no nosamborina noho ny trafikana rongony. Tetsy Faravohitra izy ireo no nalain’ny polisin’ny BC rehefa narahi-maso nandritry ny fotoana elaela. Ampéthamine milanja antsasakilao no sarona tao amn’izy ireo. Izy io dia karazam-panafody izay ampiasaina amin’ny olona tena marary mafy sy miady amin’ny fahafatesana mba hampihena ny faharariana. Mila taratasy avy amin’ny dokotera vao afaka mividy izany. Be mpitady azy anefa ireo “te hanidintsidina”.
Kara-panondro miisa 106 no nisy nanary tao ambany tetezan’i Tanjombato ka nisy nahita. Mandeha avy hatrany ny saina hoe sao dia nampiasaina tamin’ny fifidianana izany ? Manahy mafy ny maro sao dia kara-panondro sandoka nentina nangalaram-bato ireo. Mitaky fanadihadiana maika amin’ny Ceni ny olom-pirenena satria be loatra ny fanahiana mandeha ankehitriny amin’ny mety ho nisian’ny hala-bato.
Ny Bianco no tena nangataka ny tsy azo hamoahana an’i Mbola Rajaonah. Nandà ny fampiantsoana azy izay efa im-betsaka natao ity mpanolotsain’ny filoha teo aloha ity. Raha ny fantatra dia mety ho tonga amin’ny fisamborana azy mihitsy ato ho ato raha toa ka mbola mandà hatrany ny fanaovana fanadihadiana azy ny tenany. Resaka afera maizina tao amin’ny ladoany no tena anton’ny fiantsoana azy izay nolaviny hatrany. Raha tsiahiviana, afak’omaly no nivoaka ny didy tsy fahazoany mivoaka an’i Madagasikara.